🥇 ▷ Apple, Samsung ayaa ku dacweeyay Mareykanka wax kabadan shucaac taleefanka casriga ah ✅
Apple, Samsung ayaa ku dacweeyay Mareykanka wax kabadan shucaac taleefanka casriga ah
Kooxda teknolojiyadda Apple iyo Samsung ayaa lagu gowracay dacwado garsoor oo heer caalami ah oo ka dhacay Mareykanka oo ku saabsan waxyeelada ka imaan karta soo-noqodka raadiyaha waxyeelada leh (RF). Horumarka ayaa yimid maalmo uun kadib markii baaritaan Chicago Tribune lagu ogaaday in taleefanno badan oo casri ah, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah qalabka taleefanka gacanta ee dhawaanta loo yaqaan ‘iPhones’ iyo telefoonnada gacanta ee ‘Galaxy’, aysan u hoggaansanayn heerarka hawada uumiga hawada.
Dacwada maxkamadda degmada ee Mareykanka ee Waqooyiga Kaliforniya, dacwada waxay sheeganeysaa in shucaaca RF uu ka yimid iPhones iyo aaladda Samsung Galaxy. ‘Ka badan xadka sharciga ah ee uu soo saaray Guddiga Isgaarsiinta Federaalka (FCC)’. Sida laga soo xigtay Apple Insider, aaladaha lagu xusay kiiska waa Apple’s iPhone 7 Plus, iPhone 8 iyo iPhone X, iyo Samsung’s Galaxy S8 iyo Galaxy Note 8.
Marka loo eego dacwadda: Dhowr jeer oo hore daabacado saynis ah, oo ay taageerayaan boqolaal saynisyahano ah oo daafaha dunida ku nool, ayaa muujiyey in soo-gaadhista shucaaca RF ay saamayso noolaha nool heerar aad uga hooseeya inta badan tilmaamaha caalamiga ah iyo kuwa heer qaran… Saamaynta waxaa ka mid ah kordhinta halista kansarka, walaaca unugyada, korodhka xag-jirnimada xorta ah ee waxyeelada leh, waxyeelada hidda-wadayaasha, isbedelka qaabdhismeedka iyo shaqada ee habka taranka, cilladaha barashada iyo xusuusta, cilladaha neerfayaasha iyo saameynta xun ee ku saabsan wanaagga guud ee aadanaha..
Apple ayaa ka doodday natiijada, iyada oo leh Tribune ma raacin habraacyada caadiga ah si loo diiwaan geliyo qiimayaasha SAR (Qiyaasta Khaaska ah). Sida ay sheegtay shirkadda. Kadib dib-u-eegis taxaddar leh iyo ansaxinta ku saabsan dhammaan noocyada iPhone ee lagu tijaabiyay warbixintii (Tribune), waxaan xaqiijinay inaan u hoggaansan nahay oo aan fulineyno dhammaan tilmaamaha soo-gaadhista iyo xadeynta. Dhammaan moodooyinka iPhone, oo ay kujiraan iPhone 7, waxaa si buuxda u sharciyeeyay FCC iyo waddan kasta oo kale oo iPhone lagu iibiyo ”.
Samsung weli jawaab kama bixin horumarkaas.